Iintengiso ze-80s: ezona ntengiso zibalaseleyo ze-80 kunye neempawu zazo | Abadali be-Intanethi
Umthombo: iGrog's Tavern
Kukho izibhengezo ezikwaziyo ukutsala ingqalelo yethu kwaye similisele amehlo ethu kuyo ngenjongo yokuthenga okanye ukuthengisa imveliso ethile. Ihlabathi lezentengiso likhulu kangangokuba asinakuze sicinge ukuba umntu unokuphela.
Yiyo loo nto, kuyo yonke imbali, iintengiso ziye zabelana ngezihlandlo ezinkulu kwaye hayi kakhulu kuluntu. Kangangokuba, iibrendi ezininzi bezibheja kwimidiya yentengiso amashumi eminyaka okanye iminyaka emininzi. Kule post size kuthetha ngentengiso, kodwa hayi nje naluphi na upapasho njengoko igama layo libhekisela, kodwa kunoko ukusuka kwiintengiso ze-80's.
Ishumi leminyaka eligcwele indaleko kunye nenguqu kwezentlalo. Ukugxekwa kunye nethemba lokufumana uphuculo kwinkqubela nganye kunye nomboniso omkhulu.
1 Izaziso: yintoni?
2 Iintengiso ezivela kwi-80's
2.1 Iimpawu zeentengiso ze80
2.1.3 Imibala engqindilili kunye neefonti
2.1.4 umgangatho womfanekiso
3 Iintengiso ezingcono kakhulu ze-80s
3.1 La Casera isibhengezo
3.2 Volkswagen Golf ad
3.3 Schweppes Tonic ad
3.4 Intengiso ye-tuna ekhanyayo
Umthombo: Uvuyo oluncinci
Iintengiso zoluntu zichazwa njengemiyalezo emincinci yexesha elifutshane kakhulu, ephawulwe ngokuqulatha iinjongo zorhwebo ezijoliswe ukukhuthaza okanye ukuthengisa, imveliso ethile. Izibhengezo zentengiso zinokuvezwa okanye endaweni yoko zisasazwe kumajelo osasazo ahlukeneyo okanye kwiinkxaso, zinokubhalwa, zibe nesandi okanye zibukelwe.
Okukwaphawula iintengiso kukuba bezisoloko zidityaniswe nentengiso. Ukuthengisa yinkqubo ekunokwenzeka ngayo ukubeka uphawu oluthile kunye nemveliso kwimarike ethile.. Ngombulelo kwintengiso, ezininzi iimpawu zonyuse ixabiso lazo kwiminti kwaye ziye zakhula kakhulu kwishishini labo.
Kukho ezinye iimpawu zezi ntengiso, ezinye zazo zibalulekile ukuba zithathelwe ingqalelo ukwazi ngokuthe ngqo ukuba ezi ntengiso zenziwe ngantoni kwaye zavela njani.
Iintengiso zimalunga chaza imveliso ethile okanye uphawu oluthile. Ngale ndlela bazama ukwazisa umthengi okanye umbonisi malunga noko bakubonayo kwaye bazame ukucenga kwaye baqinisekise ukuba bathenge imveliso ethile. Oku kuya kuba masithi eyona njongo iphambili okanye isiseko esiphambili seentengiso.
Ngokuqhelekileyo ziqulethe izinto zegraphic okanye izinto ezinomdla kakhulu ezilawula ukucenga uluntu. Umzekelo, ukusetyenziswa kwemifanekiso njengomthombo oyintloko. Ukwenza oku, banemifanekiso ethile elawula ukudibanisa nombukeli.
Okwangoku, iintengiso ezilahlekisayo zikhuselwe kakhulu, nto leyo iphambili kakhulu. Kwiminyaka eyadlulayo, oomabonwakude abaninzi babesebenzisa izibhengezo ezazifuna kuphela ukubamba imali, iimbono okanye ukuthenga.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zentengiso, kodwa phakathi kwezona zibalaseleyo sifumana: iimvakalelo, uthelekiso, umlinganiswa okanye abalinganiswa, ubungqina, njl. Ngamnye kubo ucinga ngeempawu ezahlukeneyo apho imalunga nokukholisa okanye ukucenga ngendlela eyahlukileyo.
Uninzi lwamaphulo entengiso amaninzi asebenzisa umsebenzi wokubhenela kwiimvakalelo kuba zezona zitsala umdla woluntu. Oku kungenxa yokuba ukuba sithetha ngengqondo yomntu, umntu usoloko ekwazi ukuba nemincili, nokuba kungenxa yesizathu esithile okanye isizathu esingaqhelekanga. Ngaphandle kwamathandabuzo, ihlabathi lezentengiso liya limangalisa ngakumbi yonke imihla.
Iintengiso ezivela kwi-80's
Umthombo: Isidalwa esiDala
Ekupheleni kweminyaka yoo-80 no-90, kumazwe afana neSpain, izibhengezo zentengiso zaqala ukunyuka kwizithunzi zazo kwaye zabona umdla owandisiweyo kuluntu. Kangangokuba iintengiso zisasazeke kumajelo ohlukeneyo osasazo, kuquka unomathotholo nomabonakude.
Kwakungekho mini, apho uluntu lwalungasebenzisi umabonwakude ukuze lubone iintengiso. Kwaye intengiso, njengoko sisazi namhlanje, yinxalenye yembali enomdla kakhulu, ngakumbi ukusuka kwixesha elihlaziywe ngokuguquguquka okukhulu kunye neenguqu, zombini kunye nezopolitiko.
Iimpawu zeentengiso ze80
Ukuba kukho into enye esiqiniseke ngayo, kukuba iintengiso ze-80s zaziphawuleka ngokusebenzisa imiyalezo ethe ngqo nebethelelwe. Uninzi lwezibhengezo zazikhapha isigidimi esinomhobe omncinane ngasemva, owawufana ngakumbi nengoma encinane enomtsalane eyayihlala ezintloko zethu imini yonke.
Ngelo xesha, imveliso ayizange inikwe ukubaluleka okukhulu, kodwa kunoko umyalezo emva kwayo. Ngesi sizathu, iibrendi ezininzi ngoku zithatha isigqibo sokusebenzisa ezinye izixhobo ezinje ngomculo onomtsalane kunye nesilogeni esithe ngqo.
Ngelo xesha, ucelo-mngeni lwalungekho kwezinye iinkalo. Umzekelo, ibhinqa lisetyenziswa njengomlingisi wekhaya kwaye bekukho impixano enkulu kuba iindima ezincinci eziyimpumelelo nezinomtsalane zaveliswa. Nangona kunjalo, ezi ndima azizange zihoywe nakubani na, kangangokuba bambalwa kakhulu abantu, ukuba yayingenguye nabani na, ababethetha ngokuchasene nolu hlobo lwesibhengezo. I-censorship yayingekho kwaye imiboniso yayithe ngqo. Umyalezo wawusethe ngqo kwaye umbukeli wayeshiywe enento efunekayo, ngaphandle kwesidingo sokuxuba ezinye izinto.
Imibala engqindilili kunye neefonti
Ngokungafaniyo neentengiso esihlala sizibona namhlanje, iintengiso ze-80s zazilayishwe ngemibala eqaqambileyo necacileyo. Kuphela kufuneka ubuyele emva kweminyaka engama-40 okanye engama-50 ukuze uqaphele ukuba, kwiintengiso ezifana neFanta, iiorenji eziqaqambileyo kunye notyheli zazisetyenziselwa ukuqinisa imveliso kunye nendawo.
Ke ngoko, umfanekiso wawumangalisa ngakumbi, ugcwele ukukhanya kunye nemibala ebukhali. Kwenzeka into efanayo nangefonti, oovimba babheja kwiifonti ezibethayo kunye nokuyila izilogeni zabo, njengoko ibiyindlela elungileyo yokutsala umdla woluntu.
Ngokuqinisekileyo, elinye inqaku lokuqaqambisa oko enkosi kwinkqubela phambili yetekhnoloji, ayisenakwenzeka. Lumgangatho womfanekiso. Ngelo xesha kwakungekho khamera ezinobuchwephesha obufanayo kunye nesisombululo esikhoyo ngoku, kwaye yinto ekufanele ukubulela ngayo, kuba imveliso yayingenakuchazwa ngokupheleleyo kwaye indawo yayingacacanga ngokupheleleyo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, itekhnoloji kunye neentengiso nazo ziye zahamba kunye kwaye zibe yimiba emibini ephawulwe ngaphambili nasemva kwicandelo leentengiso.
Iintengiso ezingcono kakhulu ze-80s
La Casera isibhengezo
Umninimzi, isiselo esihlwahlwazayo esidumileyo, wenza intengiso phakathi kwiminyaka yoo-80. Umyili wayo, uJosé Luis Zamorano, wathumela enye yezona ntengiso zibalaseleyo waza wafumana iimbasa ezininzi ngayo. Kangangokuba yawongwa njengeyona ndawo ibalaseleyo yentengiso enyakeni ngoMthendeleko weNtengiso wesixeko saseSan Sebastian ngo-1986.
Isibhengezo siqinisa ukubaluleka kwemveliso, sibhenela ukuba sisiselo esingcono kakhulu, kangangokuba ukuba isiselo asikho kwintlanganiso, intlanganiso iyacinywa ngokukhawuleza.
wolswagen Yenye yeemoto zemoto ezongeziweyo ukwenza elona phulo libalaseleyo lee80s. Yayiyenye yezona ntengiso zinomdla kakhulu kwaye eyona nto yatsala umdla woluntu, kuba inkampani yasebenzisa umfanekiso wesidoda ukwenza intengiso ingafi. Ababukeli abazange basikholelwe eso saziso. Kangangokuba isilogeni sasinesihloko esithi «Oko ubusemncinci kakhulu ubusoloko uthanda ukufika kuqala. Ngaba uyasiqonda isizathu sokuba uthanda iGolf GTI ngoku? Ngaphandle kwamathandabuzo, esinye sezona zilogeni ziphumeleleyo.
Schweppes Tonic ad
Phakathi kwe-80, indoda egama linguBenard Le coq yenza amawaka abantu baseSpain bathandane ne-Schweppes tonic. Kangangokuba ngelo xesha, akukho mntu wathabatha okanye wadla le mveliso. Kwakungekho de kwasungulwa isibhengezo, xa amawaka abantu aqala ukuyidla ngaphandle kokuyeka. Yenye yezona ndawo zimangalisayo nezisebenzayo eziye zenziwa ngokutsha kwaye zenziwa. Kwakhona, ungalindeli ukuba ezona ntengiso zingcono zihlala zivela kwinqanaba eliphezulu lokucenga. Ngokungathandabuzekiyo enye yeentengiso eziye zatsala ingqalelo enkulu eluntwini.
Intengiso ye-tuna ekhanyayo
Isibhengezo sophawu lwetuna edumileyo, uClaro Calvo, wayenombono wokuyila intengiso eyayinengoma emnandi enokuthi wonke umntu akwazi ukuyikhumbula. Ikwayenye yezona ntengiso zibalaseleyo zelo xesha kwaye yenye yezona ndumiso zikhunjulwayo ngaphandle kwamathandabuzo.
Ngamafutshane, ezi ibe zezona ntengiso zibalaseleyo ze-80s, kukho abanye abafana noCoca Cola, apho wongeza khona ukwenza izibhengezo ezibaluleke kakhulu kunye nezobuchule. Kufuneka nje sithelekise ezi zibhengezo kunye nezo zangoku ukuze siqonde ukuba siguquke kangakanani na.
Kukho iintengiso ezininzi eziye zabakho iminyaka emininzi kunye namashumi eminyaka. Kodwa baninzi kwaye bambalwa kakhulu ngexesha elinye, abo bathe bamakisha ngaphambili nasemva kwexesha leentengiso. Ngesi sizathu, kubalulekile ukuba uzibhale malunga nabo kuba begcina imbali emva kwabo.
Kwakhona kubalulekile ukuqaphela ukuba uninzi lwazo lunempembelelo yezentlalo nezopolitiko. Ngoku ixesha lifikile lokuba uphande kwaye ufumane amawaka kunye namawaka emiyalezo efihlwe ngasemva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iintengiso ze80's